Helical Line Fittings Manufacturers na Suppliers | China Helical Line Fittings Factory
Jera si ngwọta maka ADSS na OPGW Gịnị na-mepụtara ka mma a pụrụ ịdabere, arụmọrụ, na-eri ịzọpụta ike nile nkesa na netwọk.
Jera awade preformed Ihọd oyiyi akwa maka iferi na gwara mmanụ efefe cabling maka aluminum na ọla kọpa na usoro maka ike nkesa HV ngalaba ulo oru maka okporo ígwè netwọk. Helical oyiyi akwa a na-eji na-efefe n'elu Telecommunication netwọk adịgide ADSS na OPGW eriri optic Gịnị.
Jera ngwaahịa nso nke preformed akara ngwaahịa na-agụnye: nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ Ihọd grips, nkwusioru grips, n'akụkụ agbatị, ejima agbatị, insulator n'elu agbatị, agha mkpara, full erughị ala splices, maka aluminum, ọla kọpa, ma ọ bụ kpaliri dabeere na-eduzi.
The grips zubere maka anchoring efefe ike nnyefe edoghi, n'okporo ámá ọkụ, ala iga, ihe nke ụlọ na rụrụ nke na-enye taa kasị dị irè usoro maka ichebe Ihọd Strand. Nke a pụrụ iche, onye-ibe nwụrụ anwụ-na njedebe bụ mma n'anya anya na free si bolts ọ bụ elu-nrụgide na-ejide ngwaọrụ. Ndị nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ Ihọd waya grips ya bụ onye mbụ na-enye cabled loop, a mma na-enye ndị ọzọ anwụ ngwa ngwa, mfe tensioning na ime mgbanwe na multiple guying. Guy-adịgide Dead-nsọtụ na-mere nke otu ihe onwunwe dị ka ndị Strand nke ha na-etinyere. Ha ga-eji na ngwaike na a na-a ofu ọnọdụ. The efefe akara kwesịrị ekwesị ekwesịghị ikwe bugharia ma ọ bụ akpa ogho banyere axis nke Strand. Ha ekwesịghị-eji dị ka ngwaọrụ gụnyere-abịa-alongs, Anam Udeme na-grips, etc
All nke ha a nwalere na mmekota nke ọkụ eletrik na Telecommunication ụlọ ọrụ iji mezuo obodo chọrọ na mba ụkpụrụ nke anyị ahịa.
Kwa ụbọchị anyị na-- Jera na-rụọ anyị ngwa iji nweta ịma aka ndị ọhụrụ nke zuru ụwa ọnụ eletriki na netwọk na-ekesa ahịa.
Anyị bụ ndị na-elekwasị anya na àgwà na na dechara ngwọta maka ahịa anyị.
Dead ọgwụgwụ Ihọd adịgide maka galvanized ígwè Strand 10T
Dead ọgwụgwụ adịgide maka galvanized ígwè Strand 90T
Suspension adịgide SGR
Strand waya Ihọd adịgide 22T
Strand waya Ihọd adịgide 38I
ACCC Ihọd adịgide LJS
Ntekwasa tie CO35 (35-50)
Ntekwasa tie CO70 (70-95)